Josef Bụ Ohu Rubeere Chineke Isi | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
ISI NKE 14
Otu Ohu nke Rubeere Chineke Isi
Josef bụ otu n’ime ụmụ Jekọb ndị ikpeazụ. Ụmụnne ya ndị tọrọ ya hụrụ na nna ha hụrụ ya n’anya karịa ha. Olee otú i chere obi dị ha maka ihe a? Ha nweere Josef anyaụfụ, kpọọkwa ya asị. Josef rọrọ nrọ ndị pụrụ iche ma kọọrọ ya ụmụnne ya. Ha ghọtara na nrọ ndị ahụ pụtara na otu ụbọchị na ha ga-akpọrọ Josef isiala. Nke a mere ka ha kpọkwuo ya asị.
Otu ụbọchị, ụmụnne Josef nọ na-azụ atụrụ n’ebe dị nso n’obodo Shikem. Jekọb zigara Josef ka ọ gaa mata ma ahụ́ ọ̀ dịkwa ha. Mgbe ha hụrụ ya n’ebe dị anya ka ọ na-abịa, ha gwara ibe ha, sị: ‘Lee! Ọrọ nrọ abịawala. Bịanụ ka anyị gbuo ya.’ Ha jidere ya ma tụba ya n’olulu mmiri nke miri emi. Ma otu n’ime ụmụnne ya aha ya bụ Juda, sịrị: ‘Ka anyị ghara igbu ya. Ka anyị resị ya ndị ọzọ ka ọ gbawara ha ohu.’ N’ihi ya, ha resịrị ya ndị ahịa si Midian na-aga Ijipt. Ha rere ya mkpụrụ ego ọlaọcha iri abụọ.
Ụmụnne Josef chịịrị uwe mwụda ya, bịanye ya n’ọbara ewu ma chịgara ya nna ha. Ha gwara nna ha, sị: ‘Ihe a ọ̀ bụ uwe mwụda nwa gị?’ N’ihi ya, Jekọb chere na anụ ọhịa adọgbuola Josef. Obi gbawara ya. E nweghị onye na-akasili ya obi.
Mgbe Josef na ndị ahụ zụụrụ ya rutere Ijipt, otu onye a ma ama aha ya bụ Pọtịfa zụụrụ ya ka ọ gbawara ya ohu. Ma Jehova nọnyeere Josef. Pọtịfa chọpụtara na Josef na-arụsi ọrụ ike, nakwa na ọ bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi. Obere oge, Pọtịfa mere ya onye na-elekọta ihe niile o nwere.
Nwunye Pọtịfa hụrụ na Josef mara mma ma gbasie ike. N’ụbọchị ọ bụla, ọ na-agwa Josef ka ya na ya kwaa iko. Olee ihe Josef ga-eme? O kweghị eme ihe a o kwuru. Josef gwara ya, sị: ‘Agaghị m eme ya, ọ bụ ihe ọjọọ. Nna m ukwu tụkwasịrị m obi, ị bụkwa nwunye ya. Ọ bụrụ na mụ na gị akwaa iko, m ga-emehie Chineke.’
Otu ụbọchị, nwunye Pọtịfa ji ike chọọ ka ya na Josef kwaa iko. O jidere Josef n’uwe, ya ahapụrụ ya uwe ya gbapụ n’èzí. Mgbe Pọtịfa lọtara, nwunye ya gwara ya na Josef chọrọ idina ya n’ike. Ihe a ọ gwara ya abụghị eziokwu. Ihe a mere ka ezigbo iwe wee Pọtịfa, ya atụba Josef n’ụlọ mkpọrọ. Ma Jehova echefughị Josef.
“Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu mgbe oge ruru.”​—1 Pita 5:6
Ajụjụ: Olee ihe ụmụnne Josef mere ya? Gịnị mere e ji tụọ Josef mkpọrọ?
Jenesis 37:1-36; 39:1-23; Ọrụ Ndịozi 7:9
KATUUN NDỊ E SERE ESE E JI AKỤZI BAỊBỤL
Olee otú ị ga-esi eme ihe dị Chineke mma ọ bụrụgodị na e nweghị onye na-ele gị? Gụọ akụkọ Baịbụl a ma mụta ihe n’ihe Josef mere.
O Nweghị Ihe Josef Mere A Tụọ Ya Mkpọrọ!
O nweghị ihe Josef mere a tụọ ya mkpọrọ. Olee ihe nyeere ya aka ịtachi obi n’ụlọ mkpọrọ?
Akụkọ Gbasara Ụmụ Ndị Ikom Jekọb
Gịnị ka ị ga-eme ma e nye nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị, ma ọ bụ enyi gị ihe ị chọrọ ka e nye gị?
FOTO E JI AKỤZI IHE
E Rere Josef Ka Ọ Bụrụ Ohu
Danloduonụ foto a ma tee ya kreyọn. Leenụ ma ùnu ga-ahụ ihe abụọ e sere na foto a a na-ekwesịghị ise na ya.
KAADỊ AKỤKỌ NDỊ DỊ NA BAỊBỤL
Kaadị Akụkọ Josef
Chọpụta ihe mere Fero ji mee Josef osote ya n’Ijipt.
Kaadị Akụkọ Pọtịfa
Danloduo kaadị akụkọ Baịbụl a ma were ya mụọ banyere Pọtịfa, bụ́ nna ukwu Josef n’Ijipt. Bipụta ya, chakapụta ya, pịajie ya abụọ, ma dozie ya.
Otú Ị Ga-esi Merie Ọnwụnwa
Mgbe a nwara Josef ka ọ kpaa àgwà ọjọọ, gịnị mere o ji jụ?